Umkhuleko webhizinisi. ? Umsebenzi nokuchichima | Ongcwele uJude Thaddeus
Umkhuleko webhizinisi el mundo Okomoya kungokoqobo esingenakukubalekela futhi singakunaki, yingakho lapho siqala umzamo omusha kuhle ukwenza umkhuleko webhizinisi Sesizoqala
Ukuze ube yibhizinisi elibusisekile, ukuze amandla amahle ageleze ngaso sonke isikhathi. Singacela ukuchuma nokuthi wonke umuntu ongena ebhizinisini lethu azizwe enokuthula nokuzola.
Thandazela ibhizinisi akudingeki libe lapho liqala khona, singathandazela amabhizinisi asevele enesikhathi sokuhamba.
Okusemqoka ukuthi umbusise egameni likaYise, leNdodana nelikaMoya oNgcwele futhi sikholwe ukuthi umthandazo esiwenzile unamandla.
Kulezo zimo lapho ibhizinisi kungeyona eyethu kepha livela kumngane noma isihlobo, singathandazela nokuthi lelo bhizinisi libusiswe futhi liphumelele kakhulu.
1 Ukuthandazela ibhizinisi Yini?
1.1 Umkhuleko wokubusisa ibhizinisi
1.2 Ngomsebenzi nomsebenzi webhizinisi eliningi
1.3 Umkhuleko kuSt. Jude Thaddeus ngebhizinisi
Ukuthandazela ibhizinisi Yini?
Ukuthandazela ibhizinisi kubalulekile ngoba ngalo singathola indlela okufanele yenziwe yibhizinisi, khumbula ukuthi kaningi sifuna ukwenza into eyodwa lapho kufanele senze into ehluke kakhulu futhi yilapho lapho ngomkhuleko singathola ikheli esilidingayo ukwenza izinqumo ezinhle futhi uhambe ngendlela efanele.
Sifanelekile ngokomoya ukuxhumana noNkulunkulu kanye nabangcwele, asikwazi ukulinda omunye ukuthi azosibusisa okungokwethu, vele singathembela kumngane noma kwilungu lomndeni kepha umthwalo ongokomoya ngowomuntu siqu, ngakho-ke kufanele sifunde ukwethemba Umkhuleko wethu uqobo
Ngeke sibuze ukuchuma ngokwezezimali uma singakholelwa ukuthi singakwazi ukukufeza, okungaphezu kokufunda ukuthandaza.
Kufanele sibe nokukholwa ukuthi umkhuleko esiwenzayo uzofinyelela ezulwini nokuthi uzofeza inhloso esiyicelile.
Lindela impendulo evela kithi imithandazo kungaba yinto enzima kakhulu kodwa Uma sikwethemba, impela kuzothatha lokho esikucelayo ukuthi sikufinyelele.
Umkhuleko wokubusisa ibhizinisi
Nkosi Ethandekayo, ngicela usizo lwakho ukuqala ibhizinisi lami. Ungumngane wami onamandla kakhulu nomlingani wami omkhulu.
Sicela uhlanganyele nami kule adventure entsha ukuze ngiphumelele. Kimi, umndeni wami kanye namakhasimende engizowasebenzela. Nginike amandla akho wokwahlulela okuhle.
Ubuhlakani bakho nokuholwa yibhizinisi lami ukuze liphumelele futhi lenze okufanele. Sonke egameni lakho lasezulwini.
Ukuchichima, ukushelela, ukuqondisa ukwenza izinqumo, imibono emisha nezinye izicelo eziningi esingazibeka phambi kukaNkulunkulu ongenza konke ukusinika usizo lomusa.
Akekho ongcono kunawe owazi izidingo ezingavela ebhizinisini lakho, khuluma noNkulunkulu bese wethula ngayinye yazo kuye.
Khumbula ukuthi ukuthandaza kukhuluma noNkulunkulu, bese ukhuluma naye futhi ungakhohlwa ukumnika isikhathi sokuphendula, ukuhambisa izingcezu zakho zikuthandele.
Akuzona zonke izinto ezizokwenzeka ngendlela esifuna zenzeke ngayo, kepha uma sithembela eNkosini, nakanjani ukuthi noma kwenzekani kuyisibusiso sethu.
Ngomsebenzi nomsebenzi webhizinisi eliningi
Nkosi Ethandekayo, ngicela usizo lwakho ukuqala ibhizinisi lami. Ungumngane wami onamandla kakhulu nomlingani wami omkhulu. Sicela uhlanganyele nami kule adventure entsha ukuze ngiphumelele.
Kimi, umndeni wami kanye namakhasimende engizowasebenzela. Nginike amandla akho wokwahlulela okuhle.
Abantu abaningi qala ibhizinisi elisha futhi bafuna ukujabulela ubuningi ngaphandle kokuqonda ukuthi kuza kancane kancane ngenkathi sisebenza.
Ngakho-ke ukucela ubuningi ngaphandle kokusebenza kucela ize. Ibhayibheli lisifundisa ukuthi ukukholwa ngaphandle komsebenzi kufile, ngakho-ke kumele sicele uNkulunkulu ukuthi asiphe inala, kodwa futhi asisebenzele ukuze sikufinyelele.
Kufanele sifunde ukwenza imisho ngendlela efanele, asikwazi ukucela okuthile esingakudingi ngempela, sicela izinto ezibalulekile kepha hhayi ngokomnotho.
Isibonelo ukuhlakanipha, ngayo singakwazi ukufeza okuningi.
Umkhuleko kuSt. Jude Thaddeus ngebhizinisi
San Julius Tadeo,
Okwamanje sicela ukuba unxuse phambi kukaBaba wethu waseZulwini,
Ekuthuthukiseni ibhizinisi lethu,
Umthombo wokusebenzela abaningi nokudla kwemindeni yethu,
Mboza yonke indawo yezibusiso,
Nabo bonke abasebenza kuwo,
Ukuze umsebenzi wethu ubusiswe oPhezukonke,
Futhi ube muhle emehlweni akhe.
Ungavumeli ngaphakathi kulo msebenzi,
Ukufumbathisa noma izithelo zebhizinisi elithile elibi kwamukelwa,
Sengathi konke esikwenzayo kungahlonipheka futhi kuhlonipheke,
Sengathi singasebenza ngokweqiniso,
Sikhokhisa okulungile futhi sisebenzela abafowethu ngothando,
Sisize ukufezekisa izinhloso ezibekelwe ibhizinisi lethu nentuthuko yezohwebo.
Siyacela ukuthi usigxilise kithando lukaNkulunkulu,
Kubo bonke abasebenza kule ndawo,
Futhi makube uthando lukaNkulunkulu nemindeni yethu,
Labo abasisiza ukwenza umsebenzi omuhle,
Busisa imicabango yethu, isenzo kanye namazwi ethu,
Siyakuncenga egameni loMsindisi wethu, Amen.
Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi kumele sithuthukiswe njengoba nje umphefumulo wethu uchuma nokuthi sifuna umbuso kaNkulunkulu nobulungiswa bakhe nakho konke okunye kuzongezwa, khona-ke sigxile kuwo wonke amandla ethu ukondla umoya wethu, ngale ndlela siqinisekisa ukuthi ukuchuma kuza usendleleni ngoba uNkulunkulu uyathembisa.
Asithembe umthandazo futhi sisebenze ukuze lokho esikucelayo kusifinyelele ngokushesha okukhulu.
Ungakhuleka ngaphezu komkhuleko onamandla womsebenzi webhizinisi kanye nenala kuNkulunkulu nakuSt. Jude Thaddeus?
Okusemqoka ukuthi uthandaze unokholo oluningi enhliziyweni yakho.
Uma unokholo futhi uma ukholwa ukuthi konke kuzothuthuka ungakhuleka ngaphandle kwenkinga.
Khumbula ukukholelwa nje ukuthi konke kuzothuthuka!